nemo, Author at Myannewsmedia
SM Entertainment ရဲ့တည်ထောင်သူ Lee So Man အတွက် ဟင်းချက်ပြုတ်ပေးချင်တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ Super Junior အဖွဲ့ဝင် Kyuhyun
By nemoPosted on June 20, 2020
နာမည်ကြီးဝါရင့် အမျိုးသား Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Super Junior ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Kyuhyun ဟာဆိုရင် သူ့အနေနဲ့ SM Entertainment ရဲ့တည်ထောင်သူ Lee So Man အတွက် ဟင်းချက်ပြုတ်ပေးချင်ကြောင်းကို မနေ့ကထုတ်လွှင့်ပြသွားခဲ့တဲ့ Olive […]
နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘ၀ပုံစံကို ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ Song Joong Ki
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Song Joong Ki ဟာ သူ့ရဲ့ လက်ရှိဘ၀ဖြတ်သန်းနေတဲ့ပုံစံ၊ အနုပညာခရီးလမ်းလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး “Hi-High” မဂ္ဂဇင်းရဲ့အင်တာဗျူးမှာအခုလိုပဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလို့သွားခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်နေထိုင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဘ၀ပုံစံက အင်မတန်မှကိုရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်… စာဖတ်တယ်… ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်… ဆေးကြောစရာရှိတဲ့ ပန်းကန်တွေဆေးတယ်…ဒီလောက်ပါပဲ” လို့ဆိုကာ ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
ဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ကို အတူတွဲဖက်ရိုက်ကူးနေကြပြီဖြစ်တဲ့ Push Puttichai နဲ့ Mai Davika
မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ထိုင်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Push Puttichai နဲ့ P’Mak မင်းသမီးရယ်လို့အသိများကြတဲ့ မင်းသမီးလေး Mai Davika တို့ဟာ အခုဆိုရင် “You’re My Heartbeat” လို့အမည်ရတဲ့ ထိုင်းဒရမ်မာဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်တစ်ခုမှာ စတင်ပြီး အတူသရုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ […]
‘Love Scenario’ ရဲ့ Dance Practice Poster မှာ ဖျက်ထုတ်ခံထားရတဲ့ B.I
နာမည်ကျော် ကိုရီးယားအမျိုးသားအဆိုတော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ iKON ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ ‘Love Scenario’ ဟာဆိုရင် ထိပ်ဆုံးကပါဝင်နေတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ iKON ရယ်လို့ နိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးလက်ခံမှုကိုရရှိစေခဲ့တဲ့ ဒီသီချင်းရဲ့ Dance Practice Video ဟာဆိုရင် အခုလက်ရှိမှာ ကြည့်ရှုသူသန်း […]
ဒီလအစောပိုင်းလောက်တုန်းက “Sulis Painting” Workshop ရဲ့ဖန်တီးမှုအမြင်အနုပညာရှင်အဖွဲ့ကနေ သိပ္ပံနည်းအရအပြီးပြည့်စုံဆုံးသောမျက်နှာပိုင်ရှင်ကို ရွေးချယ်ဖို့အတွက် ဆန်ကာတင်စာရင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာကျော် K-pop အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Jin ဟာလည်း အဆိုပါစာရင်းရဲ့ထိပ်ဆုံး သုံးယောကထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်နှစ်ယောက်တော့ ဗြိတိန်လူမျိုးသရုပ်ဆောင် […]
မင်းသမီးဖြစ်နေမယ့်လည်း စတိတ်စင်သန့်ရှင်းရေးကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တဲ့ Lee Dahee
By nemoPosted on June 19, 2020 June 19, 2020
ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့ မနေ့တုန်းက Mnet ကနေ’Road to Kingdom’ ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကို ထုတ်လွှင့်ပြသသွားခဲ့တဲ့အပြင် အပိုင်းတစ်ကနေ နောက်ဆုံးပိုင်းထိရိုက်ကူးခဲ့သမျှထဲက အကောင်းဆုံးသော ရိုက်ကွက်တချို့ကိုလည်း စုစည်းတည်းဖြတ်ပြီး အထူးဗီဒီယိုအနေနဲ့ ထုတ်လွှင့်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရိုက်ကွက်တွေထဲကမှ ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားစေခဲ့တာကတော့ သရုပ်ဆောင်လည်းဖြစ်၊ […]
အကြောင်းအရင်းမျိုးစုံကြောင့် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အသီးသီးကနေ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ Idol များ
K-pop Idol တစ်ယောက်ဟာ မြောက်များစွာသောသတင်းပြဿနာရပ်တွေမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်နေပြီဆိုရင် အဖွဲ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆယ်ယူတဲ့အနေနဲ့ အဆိုပါ Idol ဟာ ချက်ချင်းဆိုသလို သူတို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကနေ ဖယ်ထုတ်ခံကြရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဖယ်ရှားခံရတယ်ဆိုတာ ရှားပါးတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း စိတ်ဝင်စားစရကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အသီးသီးကနေ ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ကြရသူတွေရှိပါတယ်။ သူတို့တွေတွေကတော့….. 1. […]
Taeyong ကို NCT ကနေထုတ်ပယ်ပေးဖို့အတွက် ပရိသတ်တွေတောင်းဆို
SM Entertainment ကနေ စင်တင်မွေးထုတ်ပေးထားတဲ့ NCT အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ Taeyong ကို အဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်ပေးသွားဖို့အတွက် ပရိသတ်တွေကိုယ်တိုင် SM Entertainment ထံ စာပို့ပြီးတောင်းဆိုလျှက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါစာဟာဆိုရင်လည်း လတ်တလော အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေအထက်မှာ ပျံ့နှံ့လျှက်ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စာထဲမှာရေးသားဖော်ပြထားချက်အရတော့ […]
လက်ရှိအချိန်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးပေါင်း ဝမ် သန်း ၆ ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Sehun
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော်အမျိုးသား Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ EXO ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Sehun ဟာဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက ဆိုးလ်မြို့ရှိ ဒုန်ဂျ(ခ်)ရပ်ကွက်မှာ အဆောက်အဦးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ယင်းအဆောက်အဦးဟာဆိုရင် မြေအောက်ထပ်အပါအဝင် (၇) ထပ်ရှိပြီး တန်ဖိုးအားဖြင့်ကတော့ ကိုရီးယားဝမ် ၃.၃၅ ဘီလီယံရှိတယ်လို့ […]
၁၀ နှစ်ကျော်ကြာသည့်တိုင်အောင် ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲလက်တွဲထားကြဆဲဖြစ်တဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာစုံတွဲများ (အပိုင်း-၂)
သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့တောင် အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်မြဲကြာရှည်အောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့ ခေတ်ကာလကြီးမှာ အောင်မြင်လူကြိုက်များတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာက ပိုလို့တောင်မှခက်ခဲ့တဲ့အရာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုဆက်လက်ဖော်ပြပေးချင်တဲ့ စုံတွဲတွေကတော့ နှစ်ယောက်လုံးဟာအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပေမယ့်လည်း တည်မြဲတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတွေကို ဖော်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့စုံတွဲတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ 1. Kwon Sang […]